China Auto Crystal Series Idriver Multimedia bokushicilela iqhosha iqhosha mveliso kunye nabenzi | MaiKaiLa
Ubungakanani bephakheji yemveliso: 20.5cm * 10.5cm * 4cm
Ubungakanani bemveliso: ububanzi be-4.5cm, ubude be-2.5cm
Ubunzima Product: 0.2kg
Ubungakanani bephakheji: 0.5kg
Sinezo zonke iintlobo zamaqhosha e-crystal afanelekileyo kuthotho lwee-BMW. Amaqhosha ethu asebusuku abonakala ngokucacileyo ebumnyameni, aphucula umbono wokuchukumisa, kwaye adibanisa ukukhanya kwangaphakathi. Ungaqhagamshelana nathi nge-imeyile kwaye ukhethe into oyifunayo.
Sisebenzisa umbala wokuqala, isibane sesibonakaliso sokubonisa izixhobo, sisebenzisa ikristale ye-BMW yomgangatho wokuqala we-chrome yokuhombisa. Zonke iimveliso zokwenza kwethu zi-1: 1 eziveliswe ngokwemveliso yoqobo ye-BMW. Iplagi inokuhambelana ngokupheleleyo kwaye ifake isokethi ye-BMW kwaye izinto kunye nokubonakala zi-100% ngokufanayo kunye nokunyaniseka.
I-Crystal eqaqambileyo yeNdawo yeTangent yeArasone eXineneyo
Okulandelayo: Isiphatho seCrystal Automotive Shift